Ukuthola iviki lokuphumula kuzolusiza Usuthu olufuna ukuqeda ishobolo lokungawini ekhaya - Impempe
Ukuthola iviki lokuphumula kuzolusiza Usuthu olufuna ukuqeda ishobolo lokungawini ekhaya
UThapelo Xoki nozakwabo baMaZulu abanomdlalo onzima neStellenbosch ngoLwesihlanu Isithombe: Twitter
AmaZulu FC athole ithuba lokudonsa umoya abheke nemidlalo edlule abone nalapho kumele aqinise khona njengoba bebengenamdlalo phakaathi neviki.
Usuthu lubuyela ensimini ngomdlalo onzima weDStv Premiership neStellenbosch FC eKings Park Stadium ngoLwesihlanu ngo 5 ntambama.
Umdlali wasemuva waMaZulu, uThapelo Xoki uthe isikhathi abasitholile sibasize kakhulu ngoba imidlalo beyisithothene kakhulu sekungenzeka abadlali begcine bekhathala.
“Okokuqala sithola iviki lonke ukuze sizilungiselele umdlalo olandelayo,” kusho uXoki. Besidlala imidlalo elandelana eduze, bese singastholi isikhathi sokuphumula nokubheka amaphutha esiwenze emdlalweni odlule nokumele siwalungise,” kuqhuba uXoki.
Leli viki linikeze nabadlali abaqala imidlalo njalo isikhathi sokuthi bake badonse umoya, kusho uXoki.
“Sibe nesikhathi sokuthi ozakwethu abahlezi bedlala nabo bake baphumule kancane. Kube yisikhathi esihle uma ubuka ngalelo liso. Nalaba abebethintekile kancane nabo bakwazile ukwelapheka kahle kungajahiwe,” kuchaza lesi sitobha esidabuka eKapa.
Ngomdlalo wabo neStellies, uXoki uthe kumele nakanjani bawuwine kwazise owokugcina kule nyanga. Usuthu alukawini lusekhaya kule sizini.
“Wumdlalo wethu, sizobe sisekhaya kanti asikawini ekhaya kule sizini. Sifuna ukuphetha inyanga yokuqala yonyaka ngewini.”
Previous Previous post: UKwem weChippa uthi sebeyayazi ukuthi ibuthaka ngakuphi iSundowns abazodlala nayo ngeSonto
Next Next post: Sesiwinwe yiSundowns isitobha seMaritzburg ebesifunwa ngabomvu yiPirates